Faahfaahin Wefdigii Kismayo Laga Celiyay Ee Madaxweyne Xasan Dulmi-Jadiid Ka Soo Diray Muqdisho
Wafdigii laga celiyey Garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa noqdey Fedeexad lasoo gudboonaatey Dowlada federaalka, waxaa goor dhaweyd Villa Somalia kusoo gabagaboobey Kulan looga hadlayey, wafdiga Kismaayo lagasoo eryey, Nairobi waxa iyana ka socda abaabul la xiriira weeraraka siyaasadeysan ee uu Madaxweynuhu ku dhaqaaqey.
Maanta oo khamiis ah 08/11/2012 waxaa shir deg deg ah isugu imaanaya, Gudiga Farsamada Jubooyinka,IGAD iyo koox dublamaasiyiin reer Galbeed ah oo laga carabaabey Dowlada Ingiriiska.
Kooxda NGO yada iyo labada nin ee Cadaanka ah
Wafdiga Kismaayo loo diidey iney galaan waxaa iyana weheliyey koox NGO ah kuwasoo watey labo nin oo ka socda mid kamid ah Hay’adaha Caalamiga ah ee samafalka, waxaana loo wadey labadaan nin in lageeyo Kismaayo lagana dhigo in NGO-yada ka howl gala Muqidho ay soo qiimeynayaan xaalada Bini aadanimo ee kaalmada u baahan, waxaana soo xuley NGO oo yadaan oo wafdiga kusoo darey Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, waana naasnuujin qaawan oo la doonayey in Kaalmada loogu tala galay Jubooyinka ilaa Gedo lasoo marsiiyo NGO yada Muqdisho.
Wafdigii laga celiyey Kismaayo oo ahaa afgambi qorsheysan wuxuu waji gabax ku noqdey Villa Somalia, iyadoo dhinaca kale Nairobi laga cambaareeyey, IGAD iyo Beesha Caalamku waxay iclaamiyeen shir deg deg ah oo bari ka dhici doona Nairobi, waxaa shirkaan wada yeelanaya Gudiga Farsamada ee maamul u sameynta Jubooyinka, IGAD iyo qaar ka mid ah Beesha Caalamka.
Waxaana dhacday in waftiga dib dayuuradda loogu celiyey, wariyeyaashiina ay waayeen boos ay ka fuulaan dayuuradda. Halkaasooy wariyeyaasha ku xayiranyihiin wali.
Jabuuti iyo Xassan Sheekh Maxamuud
Waxaa la fahamsanyahay in dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha cusub ay isku aragti ka yihiin arrimaha Kismaayo, iyadoo dowladda Jabuuti ay horey si cad oga hadashay, soona farogalisey arrimaha maamul u samaynta Jubbooyinka.
Afayeenka AMISOM ayaa waxa uu ka socdaa dalka Jabuuti, iyadoo uu doonayay in uu indhahiisa kusoo arko dhuxusha dekada Kismaayo ka dhoofeysa, balse taasi waxa ay ku kala aragti duwanyihiin ciidamada AMISOM ee Kenya ka socda oo iyagu xal u arka dhoofka dhuxusha.
Waxaana xusid mudan in waftiga uu Xaamud la socday dib loogu celiyey amar uu bixiyey sargaal ciidamada Kenya ka tirsan.
Maanta fadhi uu yeeshey golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayay wadmada ku kala jabeen arrinka dhuxusha ee Kismaayo, iyadoo waraaq uu golaha u direy madaxweynaha laga akhriyey fadhiga taasi oo uu ku diidanaa in la fasoxo dhuxusha la dhoofinayo.
Dagaal-Ooge-Goobaale iyo Dagaal-Ooge Indhacade
Gudigan Kismaayo loo soo diray ayaa waxaa ka mid ahaa Dagaal-Ooge Indhacade iyo Dagaal-Ooge Goobaa, oo iyagu ahaa abaanduulayaashii maleeshiyaddii mudada 10-ka sanno xooga iyo qoriga caaradiisa ku maamuleysay Kismaayo ee la baxday Dooxada Jubba, balse dadka deegaanka u yaqaaniin Dooxata Jubba,ayaa ka mid ahaa 8-da xubnood ee Dawladda u wakiilatay arimaha Kismaayo ee la soo tarxiilay loona diiday inay Dayuuradda ka soo degaan,Goobaale iyo indhacadde ayaa ah dhagarqabeyaal , dambiyo badan loo heysto
Goobaale iyo Indho-cadde oo kaliya ma ahan Saraakiishii Dooxatada Jubba ka tirsan ee arrimaha Jubbooyinka kasoo galay xagga dowladda, ee sidoo kale Shacabkamedia waxa ay ka warheysaa in nin mar afayeen u noqdey kooxdani uu ka midyahay gudiga farsamada maamul u samaynta Jubbooyinka, isagoo ku socda magaca dowladda, balse markani gobolka Gedo matalaya.
Ceel Biir ah Eey baa lagu sahmiyaa
Waxay u egtahay in waftigani dowladda iyo AMISOM ay sahan ahaan isaga hormariyeen koox warfidiyeeno ah oo badankood ka socdey warbaahinta caasimadda ee dabka sii hurineysa, kuwaasoo dayuurad ay keentey garoonka Kismaayo, dayuurada oo dib u noqotey si ay usoo qaado waftiga.
Socdaalka waftiga oo horey loogu wargaliyey in aysan magaalada imaan karin, islamarkaasina iyaga laftooda labbo jeer safarkooda baajiyey, ayaa waxa uu huwanaa kormeerka iyo ogaanshaha arrimaha dhuxusha.
Madaxweynaha cusub ayaa war saxaafadeed uu dhawaan soo saaray ku mabnuucey dhuxusha Kismaayo taala in la dhoofiyo, waxana uu haatan ka madax qabsanaa in amarkiisa la buriyey oo maalintii sedexaad ay dhuxusha dhoofeyso.
Waxaa kale oo amarkan ka horyimid wadamada Igad oo shir ku yeeshey Adis Ababa, kadibna isticmaaley qaanuun Qaramada Midoobey leedahay oo lagu baalmari karo cunaqabataynta haddii shuruudo gaar ah lasoo buuxiyo.
Qodob kale oo dhoofinta dhuxusha loo cuskaday ayaa ahaa in la isticmaalay awooda Igad iyo Midoowga Afrika oo iyagu xaq u leh in ay talaabooyinka qaar qaadaan iyagoon amar iyo ogolaansho oga baahneyn Qaramada Midoobey, xitaa haddii uu jiro qaraar arrinkaasi mabnuucaya.
Waxay u egtahay in muranka Kismaayo uu sii socon doono, laakiin aanan dheg jeleq loo siin doonin, hawlahana ay ku socdaan xawaare sare
Jimcada waxaa Kismaayo ku wajahan Gudiga Farsamada oo ay weheliyaan IGAD iyo dhowr Dublamaasi oo ka socda Reer Galbeedka, waxayna u socdaan soo qiimeynta xaalada Goboladaas.